Iindaba eNigeria kunye nangaphaya: UDavido kwi-Nick Cannon's Wild N 'Out
I-Rave News Digest: UDavido Kwikhefu likaNick Cannon's N N Out, eNigeria I-Deregista Amaqela ezopolitiko, uRaheem Sterling + Okungakumbi
DI-avido kwi-Nick Cannon's 'Wild N' Out ', eNigeria abaqhawula amaqela angama-74 ezopolitiko, uRaheem Sterling uphume iiveki. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UDavido wenza umlenze emsebenzini kwi-Nick Cannon's Wild N 'Out
Imidiya yezentlalo yaya kwi-agog xa ividiyo ye-superstar yaseNigeria Davido ukwenza pa Nick Cannon's 'I-Wild N' Out 'ngexesha lendawo yomculo ebizwa,' I-Wildstyle 'yenzeke nge-6 kaFebruwari.
Kwividiyo, uDavido wabonwa edlala ingoma nezinye iindwendwe kuloo mboniso. Ayenzanga kuphela, wenza kwakhona gbese kwaye Umsebenzi womlenze iintshukumo ezithathe umhlaba wokudanisa.
'I-Wild n' Out 'ibanjwe ngumdlali weqonga, umhlekisi kunye rapper, uNick Cannon wenzeka eAtlanta, eGeorgia, apho uDavido wakhula njengomntwana. Isiqephu esitsha somoya sihlala ngoLwesibini, nge-11 kaFebruwari ngo-2020 ngo-8 / 7c kwi-VH1.
2. I-Equatorial Guinea inikezela ngeedola ezi-2m kwi-'Sizwe yesizwe 'China
La mazwe mabini axhamla ulwalamano olusondeleyo kwaye noomongameli bawo baye badibana ngaphambili
Umongameli we-Equatorial Guinea ubhengeze ukuba ilizwe elinobutyebi obuninzi liza kunikela ngeedola ezi-2m (zeedola 1.5m) ukunceda “ilizwe lesizwe” iChina njengoko kusiliwa uqhushululu lwe-coronavirus esele ibulale abantu abangama-636.
I-China iqhayisa ngokuba noqoqosho lwesibini ngobukhulu kwihlabathi emva kwe-US, kunye ne-GDP yayo ye- $ 13.6tr encinci ye-Equatorial Guinea ye- $ 13.4bn. Isigqibo senziwe kwintlanganiso yeekhabhathi ngoLwesibini kwaye ijongwa njengomboniso “wenkxaso kunye nobumbano” kwelinye lamaqabane aphambili e-Equatorial Guinea.
Nangona i-Equatorial Guinea ingumvelisi weoyile wesithathu ngobukhulu eAfrika, ngaphezu kwesiqingatha sabemi bahlala ngaphantsi komgca wentlupheko.
3. eNigeria abahlali abangama-74 amaqela ezopolitiko
U-Banky W uphumelele kumacandelo amabini okuvota e-Eti-Osa kwingingqi yeLagos State
Ikhomishini yonyulo yaseNigeria inyhashe amaqela ezopolitiko angama-74 kweli lizwe, ishiya abali-18 bamkelwe ngokusesikweni kwelona lizwe linabantu abaninzi baseAfrika. Yathi yasilela ekufezekiseni iimfuno ezithile zomgaqo-siseko. Ukuze yamkelwe ngokusesikweni, iqela kufuneka liphumelele ubuncinci iipesenti ezingama-25 zeevoti ezonyulwe kulo naluphi na unyulo federal, urhulumente okanye kwinqanaba lendawo- okanye liphumelele ubuncinci kwiwadi enye kunyulo loorhulumente beengingqi.
Elinye lamaqela abhalisiweyo abandakanya iqela leDemocratic Party (i-MDP) yanamhlanje. Yasekwa ngamaqela olutsha ukuba atyhalele umthetho wokuba "awubikho mncinci kakhulu ukuba abaleke", eyapasiswa ngoMeyi ka-2018 yaze yehlisa iminyaka yobuncinci ukuba ibambele ubongameli, irhuluneli yombuso kunye nesenetha ukuya kwangama-30. indibano, iminyaka yobudala yehlisiwe yangama-25.
Omnye wabagqatswa kunyulo luka-2019 yayiyimvumi U-Olubankole Wellington, eyaziwa ngegama lakhe lesigaba Yibhanki W, ongaphumelelanga ukuphumelela isihlalo seNdlu yoBameli kodwa wathi ngelo xesha yayisesisiqalo se-MDP.
4. Inkokheli yase-Yemen al-Qaeda ye-al-Rimi ebulewe ekusebenzeni e-US ithi, uTrump
UTrump uthe i-US kunye nabalingane bayo bakhuselekile ngenxa yokubulawa kuka-al-Rimi
Mongameli uDonald Trump uthe ngolwesine ukuba imikhosi yase-US ibulele Qassim al-Rimi, inkokeli ye-al-Qaeda kwi-Arabian Peninsula (AQAP), ekusebenzeni ngaphakathi kwe-Yemen. IAl-Rimi yabanga uxanduva lokudutyulwa kwangoko kunyaka ophelileyo kwisikhululo seenqwelomoya eMelika ePensacola eFlorida, apho umqhubi wenqwelo moya waseSaudi wabulala oomatiloshe abathathu base-US.
I-AQAP yade yathathelwa ingqalelo njengeyona nto iyingozi kwi-al-Qaeda kwezokuzama ukuqhuba uhlaselo kwilizwe laseMelika. UTrump uthe i-US kunye nabalingane bayo bakhuselekile ngokufa kwakhe.
"Siza kuqhubeka nokukhusela abantu baseMelika ngokulandela umkhondo kunye nokuphelisa abanqolobi abafuna ukusenzakalisa,”UTrump uthe ngoLwesine.
5. URashe Sterling uphuma 'iiveki' ngokulimala kwesando
URaheem Sterling wajoyina iManchester City esuka eLiverpool ngo-2015
IManchester City phambili Raheem Sterling ziya kuphuma "iiveki" ngenxa yokulimala ngesando, ngokokutsho komphathi Pep Guardiola. Izwe lase-England, elineminyaka engama-25 ubudala, laphuma lazahlulahlula iklabhu yakhe ngo-2-0 eTottenham ngeCawa.
"Kuthatha iiveki, kodwa andazi ukuba kunini, ” U-Guardiola utshilo.
ISixeko esabekwa kwindawo yesibini, esingamanqaku angama-22 emva kweenkokheli zaseLiverpool, siqinisekisile ukuba iskena siveze umonakalo kwi-hamtering yase-Sterling yasekhohlo. USterling ubonakalise kwimidlalo engama-23 yeligi yeSixeko kule sizini.
"Uqalile ukuqeqesha nathi. Kufuneka alulame u-tempo kunye nokuzithemba,Umphathi weSixeko uqinisekisile. "Kufuneka ixesha. Udinga iiveki. ”
IVeki yeendaba yethu yoSuku lweeVeki ikulethela isishwankathelo sezihloko ezintlanu ezishushu namhlanje eziquka iindaba zakutshanje eNigeria, iindaba zaseAfrika, iindaba zezopolitiko, iindaba zamazwe aphesheya, iindaba zeHollywood, iindaba zemidlalo kunye neendaba zabantu abadumileyo baseNigeria nabadumileyo baseAfrika. Kwakhona, lindela amanye amabali aphezulu kunye nezinye iindaba ezihambahambayo zakutshanje namhlanje eSahara. Isishwankathelo seendaba zamva nje zaseNigeria namhlanje ngo-2020.
Uhlobo Rave Februwari 7, 2020